Ifektri - Jiangsu Senwei Electronics Co, Ltd.
Ukuphathwa Kagesi kagesi
Zilungele i-elekthronikhi, izimoto, insimbi, imishini, ukudla, umuthi njll.
Indlela yendabuko yendabuko yokulinganisa ukusetshenziswa kwamandla kwezinhlobo ezahlukahlukene zamafektri kuholela ekupheleleni, idatha engafanele futhi engaphelele yokusebenzisa amandla kagesi, okwenza kungenzeki ukuhlaziya kanye nokuhlonza ukusetshenziswa kukagesi, okuholele ekuphathweni okunganele kokusetshenziswa kukagesi kanye nemishini ehlukahlukene Akukho okusebenzayo kusho ukulawula ukusetshenziswa kwamandla, ngakho-ke kukhona ukungcola okuhlukahlukene kukagesi. Isixazululo sohlelo lokuhlola ugesi esikhiqizwayo esisebenza efektri singakwazi ukuqoqa futhi sidlulise idatha yokusebenzisa ugesi yemishini ehlukahlukene efektri ngesikhathi sangempela, okulungele abaphathi ukuthi babheke futhi bahlaziye ukusetshenziswa kukagesi kwemboni yonke nganoma yisiphi isikhathi, ukuze kuqiniswe ukuphathwa kokusetshenziswa kukagesi kwefekthri, kunciphisa ukusetshenziswa kwamandla futhi kukhiqize izinzuzo zokonga amandla.
Isisombululo sokulawulwa kokukhiqiza amandla wezezimboni sihlanganisa amasango anokuqonda, ukukalwa okuqondayo namadivaysi okulawula, ukuguqula idatha okunobuhlakani, amathuluzi wokuqapha amandla neminye imikhiqizo ezenzakalelayo yezimboni. Phakathi kwazo, imitha yamandla esebenza ngemisebenzi eminingi inesibopho sokuqoqa amapharamitha wokusetshenziswa kwamandla nedatha yekhwalithi yamandla yemishini ehlukahlukene yokusebenzisa amandla endaweni ngayinye yezitshalo, futhi idlulisele yonke imininingwane yokusetshenziswa kwamandla esitshalweni ohlelweni lokulawula amandla e-smart ngokusebenzisa umshini wokuphatha ukuxhumana, ukuze ubheke ngokomqondo idatha yokusetshenziswa kwamandla Nokuhlaziywa, kusiza abasebenzisi ukuthola isikhala esonga amandla, sinikeze ukusekelwa kwedatha yokusetshenziswa kwamandla kwabasebenzisi ukwenza izindlela nezinhlelo zokonga amandla, ekugcineni bafeze inhloso yokuthuthukisa amandla jikelele ukusebenza kahle kokuphathwa kanye nezinga lokusetshenziswa kwendawo yezitshalo.
Ukusebenza kwamandla kohlelo lokulawulwa kwamandla efekthri
Ngemuva kokwethula izixazululo zokulawulwa kwamandla wezezimboni, amakhasimende angabona lezi zinzuzo ezilandelayo:
I-7 * amahora angama-24 okuqapha real-time: Ipulatifomu yokulawulwa kwamandla isekela isiphequluli sewebhu, futhi abasebenzisi bangaqaphela ukubhekwa kwesikhathi sangempela sesimo sokusebenza nesimo sokusetshenziswa kwamandla kwemishini ehlukahlukene endaweni yezitshalo ngokusebenzisa amadivaysi ahlakaniphile, futhi ine umsebenzi we-alamu wesikhathi sangempela ukuze usebenzise amandla angajwayelekile.
Ukubonwa kwamandla: amakhasimende angathola ukuqonda okujwayelekile kokusetshenziswa kweminyango ehlukahlukene nemithombo ehlukahlukene yokusetshenziswa kwamandla ngogesi kanban wohlelo lokulawula amandla. Amakhasimende angafunda ngesimo semishini ngokuningiliziwe ngesiphequluli sewebhu, abambe imininingwane yamandla noma kunini futhi noma kuphi, futhi asebenzise ukusetshenziswa kwamandla Ukuhlaziywa okungahambi kahle kokusetshenziswa kwemishini yamandla, ukubikezela ukwehluleka okungenzeka kwemishini, ukunciphisa isilinganiso sokuhluleka kwemishini.
Yenza isu lesayensi lokonga amandla: Abaphathi bezinsizakusebenza bangaxazulula izinkinga ezifana nephutha elenziwa ngamaphutha nedatha engalungile ekufundeni kwamamitha wesintu ngohlelo lokuphathwa kwamandla smart, bahlaziye idatha yokusebenzisa amandla ezingxenyeni ezahlukahlukene kanye nemishini ngendlela esheshayo, izindleko nezindleko zamandla. Qamba amasu wamandla futhi uthuthukise ukuphathwa kwamandla.
Sungula izinkomba ezisebenza kahle zamandla: Ngokuhlola izinkomba zokuhlola ukusebenza nokuhlaziya, bese ulungisa indlela esebenza ngayo amandla, ukuqoqwa kwedatha kungenziwa ngokuya ngama-workshop, iminyango, izinqubo, amaqembu, imigqa yokukhiqiza noma imishini, kanye nezinkomba zokuhlola ukusetshenziswa kwamandla kwe-KPI yakhelwe ukufeza izinhloso zokonga amandla.
Kahle izindleko zikagesi futhi uthuthukise ukusebenza kahle kwamandla: umbiko ophelele wokuphathwa kwamandla kohlelo ungabuza idatha yomlando ku-inthanethi, futhi unezibalo ezahlukahlukene zamandla namathuluzi wokuhlaziya ukukhomba izihigi ezinamandla amancane futhi zisebenzise izindlela zokuphucula amandla; Ukusetshenziswa kwamandla Amandla we-Peak afunayo ama-alamu, ukuhlaziya umkhuba, ukushelela kokuphakeme nokugcwaliswa kwesigodi kanye nokulawulwa kokuvalwa kwemithamo ukuvala inani lamandla aphezulu nokuvikela inhlawulo eyeqile yokusetshenziswa kukagesi.
IFeter Electricity Management ilungele i-elekthronikhi, izimoto, insimbi, imishini, ukudla, umuthi njll.